Sidee xaalka bulshada ajnabiga ahi noqon doonaa ka dib doorashada 2009 | WWW.SOMALILAND.NO
Sidee xaalka bulshada ajnabiga ahi noqon doonaa ka dib doorashada 2009
Posted on Agoosto 3, 2008 by mohamud
Sida laga war qabo waxa 2009 dhici doonta doorashadii baarlamaanka ee Dalka Norway. Qiyaastii ilaa saddex ra’yi cabirid lagu waydiiyay bulshada norwiijiga ah xisbiga ay codkooda siin doonanaan,ayaa si u muujiyanaya in xisbiga Frp uu si weyn uga horreeyaa xisbiyada kale.
Hadaba horumarkan uu sameeyay xisbiga Frp oo ah xisbi aad cadow ugu ah bulshoonka aan asalkoodu ahayn norweejka, ayaa werwer ku abuurtay dadka intiisa badan. Su’aalaha ay tahay in la iswaydiiyo ayaa ah
1) Saameyn intee le’eg ayay ku yeelan doontaa xaalada dadka u soo haajiraya dalka Norway, ha ahaadeen kuwa magangelyo doonka ah ama kuwa u soo haajiraya inay ka xoogsadaan dalkan Norway?.
2) Dad gaadhaya boqolkiiba laba (2%) ayaa lagu qiyaasaa inay haystaan dhalashada dalka Norway, dadkan oo isugu jira kuwo dhashey dalkan, kuwo ku barbaarey iyo kuwo yimid iyaga oo dad weyn ah . Waxa ay inta badan kala kulmaan weerar qayaxxan xisbigan Frp ee u xusl dooban inuu hantiyo awwoda dawladeed ee Norway. Sidee ayay hadaba tani u saameyn doontaa noloshooda maalinlaha ah?
Hadaba horumarkan uu sameeyay xisbiga Frp oo ah xisbi aad cadow ugu ah bulshoonka aan asalkoodu ahayn norweejka, ayaa werwer ku abuurtay dadka intiisa badan.
Su’aalaha ay tahay in la iswaydiiyo ayaa ah
2) Dad gaadhaya boqolkiiba laba (2%) ayaa laqiyaasaa inay haystaan dhalashada dalka Norway, qaarkood waa ku dhasheen kuwa kalena ku barbaareen. waxa ay inta badan kala kulmaan weerar qayaxxan xisbigan Frp ee u xusl dooban inuu hantiyo. Sidee ayay hadaba tani u saameyn doontaa noloshooda maalinlaha ah?
Inta aynaan u gelin jawaabta labadan su’aalood, arrinta aynu diirada saarno ayaa ah, maxaa sababay in xisbagan Frp uu gaadho guulahan siyaasadeed?.
Waa sua’aal ay aad u adag tahay in loo helo hal jawaab oo kaafi ah, balse aan ugu horreyn wax yar ka iftiimiyo waxa uu u taagana yahay xisbagani. Xisbiga Frp oo ah 34 jir kuna cusub marsraxyada siyaasada, waxa uu ay ubucdiisa siyaasadeed tahay in la yareeyo cashuuraha faraha badan ee laga qaado dadka shaqaalaha iyo shirkadaha gancsi. Waxa kale oo xisbiga sii xoogaystay markii dadka xoogsatada ah ee aan ka soo jeedin asal ahaan wadamada yurbubta galbeed ay u soo haajireen dalka Norway sanadihii sideetameeyadii.
Ma aha labadan arrimood oo keliya kuwa u sahlay in Frp uu aad u xoogaysto, laakiin xisbigan waxa kale oo lagu yaqaanaa inuu yahay xisbi xagga ugu xigta midgta ka jooga siyaasada Norway, dakhliga dalka ka soo gala saliidana uu aa sarreeyo, waxa uu mar kasta ku galaa ololaha siyaasadeed in uu lagata saliida xad dhaaf ah ugu adeegsan doono adeegyada bulshada, uuna samayn doono cahsuurdhaaf badan.
Waxa ka mid ah xeeladaha siyasadeed ee ay adeegsadaan, in ay ka kaluumaystaan bad kacsan. Xasuuso markii qaar ka mid ah jaraa’idka Norway ay sawireen qaar ka mid ah sawir gacmeedyadii lagu aflagaadeeynaya Nebigeena suuban ee Muxamed NNHK, ee ay taasi dhalisay in safaaradadda Norway ku leedahay Syriya gubeen dad gadoodsani. Frp waxa uu aad isugu muujiyay in yahay xisbiga keliya eedifaacaya cadowga Norway ee ay ku tilmaameen dadka muslimiinta ah.
Mid kalena waxa ay tahay, qiimaha shidaalka oo kur u kacan xaggagan aynu ku jirno, aadna u taabatay bulshad norweejka ah. In kasta oo taa Norway kala siman tahay dunida inteeda kale, hadana Frp waxa uu u adeegsaday in uu masuuliyada dusha ka saaro dawlada hadda jirta.
Hadaba xisbigan oo ay u codayn jireen dadka aan aqoontooda wax barasho ka sarrayn dugsi sare, dadka neceb soo galootiga iyo dadka dadoodu aad u wayn tahay, ayaa muddooyinkii danbe kasbaday qaar ka mid ah ganacsatada waa weyn. Waxa kale oo uu xisbugu hantiyay badhasaabyada magaalooyin ay ka mid yihiin Bergen iyo Fredrikstad.
Bulshada norweegku maadaama uu dalku hodan ku yahay saliida, waxay intii muddo ah quudhdarraynayeen in laga dhimo cashuurta laga qaado, loo jebiyo gaadiidka gaarka ah, taa kama se ay helin muddadii ay awooda haysteen xisiyada kale.
Norway waa dal aad ugu bixiya lagag badan caawimada ay la siiyo dalaka fakhriga ah, door wayna ka ciyaara nabada dunida sida Yuhuudda iyo Falastiinda, Soomaaliya iyo meelaha kale ee iska horimaadyada siyaasadeed aafeeyeen.
Hadaba Frp oo intaa aad midna rabin in uu ku isticaamlo wakhti iyo lacag midna ayaan la malayn karin sida ay noqon doonto Norway hadii uu hogaanka qabtaan Frp. Sidoo kale ma ka heli doonaan xisbi ku taageera isbedelada ay soo hordhigaan Baarlamaaka, waxa se iska cad in aan ay sida Denmark aad yaray doonaan sharciyada soogalootiga weliba dadka ka imanaya dunida sadexaad.
Waxa afka dhulka dari doona dad badan oo norweej ah oo maxaysato ah oo hada ah salaanka uu Frp u fuulayo awooda.
Inagana dhamaan waxa inala gudboon in intii aan kari karno aan codayno marka la gaadho xilga doorashada.
« RAAD TV OO LAGA DAAWADAY YURUB, IYADOO HORE LOOGA DAAWADAY AUSTRALIA, ASIA IYO AFRICA Qayla Dhaan Gurmad Doon Ah Oo Ka Timi Wasiir Ku-xigeenka Cadaalada Somaliland Oo Ku Xayiran Qol Ka Mida Hotel Meridian Ee Adis-Ababa »